11 O wee ruo ná mmalite afọ,+ n’oge ndị eze na-eji aga agha,+ na Devid zipụrụ Joab na ndị na-ejere ya ozi na Izrel dum ka ha gaa bibie ụmụ Amọn,+ nọchibidokwa Raba,+ ma Devid nọ na Jeruselem. 2 O wee ruo n’oge mgbede na Devid biliri n’ihe ndina ya, na-ejegharị n’elu ụlọ+ eze; ọ nọkwa n’elu ụlọ ahụ hụ+ otu nwaanyị na-asa ahụ́, nwaanyị ahụ makwara mma nke ukwuu.+ 3 Devid wee zie ozi jụta banyere nwaanyị ahụ,+ otu onye wee sị: “Onye a ọ́ bụghị Bat-shiba+ nwa Elayam,+ nwunye Yuraya+ onye Het?”+ 4 E mesịa, Devid zigara ndị ozi ka o wee kpọrọ ya.+ Nwaanyị ahụ wee bịakwute ya,+ o wee dinaa ya.+ N’oge ahụ, nwaanyị ahụ nọ na-edo onwe ya nsọ n’ihi adịghị ọcha ya.+ E mesịa, ọ laghachiri n’ụlọ ya. 5 Nwaanyị ahụ wee tụrụ ime. O wee zie ozi gwa Devid, sị: “Adị m ime.” 6 Devid wee zie Joab ozi, sị: “Zitere m Yuraya onye Het.” Joab wee zigara Devid Yuraya. 7 Mgbe Yuraya bịakwutere Devid, Devid malitere ịjụ ya otú Joab mere na otú ndị Izrel mere nakwa otú agha si aga. 8 N’ikpeazụ, Devid sịrị Yuraya: “Laa n’ụlọ gị saa ụkwụ gị.”+ Yuraya wee si n’ụlọ eze pụọ, e wee jiri onyinye obiọma eze sochie ya azụ. 9 Otú ọ dị, Yuraya dinara n’ebe e si abanye n’ụlọ eze, ya na ndị ọzọ niile na-ejere onyenwe ya ozi, ọ laghịkwa n’ụlọ ya. 10 Ha wee gwa Devid, sị: “Yuraya alaghị n’ụlọ ya.” Devid wee sị Yuraya: “Ọ́ bụghị njem ka i si bata? Gịnị mere na ị laghị n’ụlọ gị?” 11 Yuraya wee sị Devid: “Igbe+ ahụ na Izrel na Juda nọ n’ụlọ ndò, onyenwe m Joab na ndị na-ejere onyenwe m ozi+ mara ụlọikwuu ha n’ọhịa, mụ onwe m kwa—m̀ ga-abanye n’ụlọ m iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ nakwa ka mụ na nwunye m dinaa?+ Dị nnọọ ka ị dị ndụ, dịkwa nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ,+ m gaghị eme ya!” 12 Devid wee sị Yuraya: “Nọkwuo ebe a taa, echi m ga-ahapụ gị ka ị gawa.” Yuraya wee nọrọ na Jeruselem n’ụbọchị ahụ nakwa n’echi ya. 13 Devid kpọkwara ya ka o rie ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ n’ihu ya. O wee mee ka ọ ṅụbiga mmanya ókè.+ Otú o sina dị, ọ pụrụ n’anyasị gaa dinara n’ihe ndina ya, ya na ndị na-ejere onyenwe ya ozi, ọ laghịkwa n’ụlọ ya. 14 O wee ruo n’ụtụtụ na Devid deere Joab akwụkwọ ozi+ wee nye ya Yuraya ka o nye ya. 15 O dere n’akwụkwọ ozi ahụ, sị:+ “Tinyenụ Yuraya n’ihu ihu ebe agha kpụ ọkụ n’ọnụ karịsịa,+ unu ga-esikwa n’ebe ọ nọ laa azụ, a ga-egbukwa ya.”+ 16 O wee ruo ka Joab na-eche obodo ahụ nche, na o tinyere Yuraya ebe ọ maara na e nwere ndị dike.+ 17 Mgbe ndị ikom obodo ahụ pụtara na-ebuso Joab agha, e gburu ụfọdụ n’ime ndị agha ahụ, bụ́ ndị na-ejere Devid ozi, Yuraya onye Het nwụkwara.+ 18 Joab wee zie ozi iji kọọrọ Devid ihe niile banyere agha ahụ. 19 O wee nye onye ozi ahụ iwu, sị: “Ngwa ngwa ị gwasịrị eze ihe niile banyere agha a, 20 ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na eze ewee oké iwe wee sị gị, ‘Gịnị mere unu ji jeruo obodo ahụ oké nso ibu agha? Ọ̀ bụ na unu amaghị na ha ga-anọ n’elu mgbidi na-agba unu ụta? 21 Ònye gburu Abimelek+ nwa Jerọbeshet?+ Ọ́ bụghị nwaanyị nọ n’elu mgbidi tụọ ya aka nkume igwe nri,+ o wee nwụọ na Tibez?+ Gịnị mere unu ji jeruo mgbidi ahụ oké nso?’ sị ya, ‘Onye na-ejere gị ozi bụ́ Yuraya onye Het nwụkwara.’”+ 22 Onye ozi ahụ gara, mgbe o ruru, ọ kọọrọ Devid ihe niile Joab ziri ya. 23 Onye ozi ahụ wee sị Devid: “Ndị ahụ ka anyị ike, ha wee pụta buso anyị agha n’ọhịa; ma anyị chụgidere ha ruo n’ọnụ ụzọ ámá. 24 Ndị na-agba ụta wee nọrọ n’elu mgbidi+ na-agba ndị na-ejere gị ozi ụta, ụfọdụ n’ime ndị na-ejere eze ozi wee nwụọ; onye na-ejere gị ozi bụ́ Yuraya onye Het nwụkwara.”+ 25 Devid wee sị onye ozi ahụ: “Nke a bụ ihe ị ga-agwa Joab, ‘Ka ihe a ghara ịdị njọ n’anya gị, n’ihi na mma agha na-eri+ otu onye dị ka ọ na-eri onye ọzọ. Lụsosie obodo ahụ agha ike, kwatuokwa ya.’+ Gbaakwa ya ume.” 26 Nwunye Yuraya wee nụ na Yuraya di ya anwụọla, o wee malite ịkwara onyenwe ya+ ákwá arịrị.+ 27 Mgbe oge iru uju+ gasịrị, Devid ziri ozi ozugbo wee kpọrọ ya laa n’ụlọ ya, o wee ghọọ nwunye ya.+ Ka oge na-aga, ọ mụụrụ ya nwa nwoke, ma ihe Devid mere dị njọ+ n’anya+ Jehova.